STREPTOMYCIN XAYAWAANKA BEERAHA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - DAAWOOYINKA
Hadda iyo ka dib wareysiga waxaa jira qulqulo ku saabsan xoolaha xoolaha lagu qasbay, taasoo keentay cudur kale oo ah lo'da ama digaagga. Si looga fogaado dhibaatooyinkaas, iyo si fudud daaweynta cuduro faafa badan ee xayawaanka, waxaa jira streptomycin, mid ka mid ah antibiyootigyada ugu horeeya.
Naqshad, foomka sii deynta, xirmada
Streptomycin - cusbada waxsoosaarka dabiiciga ah ee soo saaro fangaska microscopic. Budada cad, oo aan ur lahayn.
Ma taqaanaa? Zelman Waxman, oo ah cilmi-baaris ku takhasusey maadada American, ayaa lagu helay helitaanka streptomycin, 1952 abaalmarinta Nobel Prize.
Streptomycin xayawaanka waxaa lagu soo saaraa weelasha quraaradaha leh ee la xiray gidaarka caarada iyo aluminiinka aluminium, miisaankiisu dhan yahay 1 g. 50 koobi waxaa lagu buuxiyaa sanduuqa kartoonka, iyo tilmaamaha loo isticmaalo sidoo kale. Waxyaabaha ay ka kooban tahay streptomycin sulfate 1 mg ee daroogadu waa 760 IU.
Daawada antibiyootikada waxaa iska leh aminoglycosides. Waxay leedahay ficil ballaaran oo ficil ah. Waa waligii ugu horreeyay ee taariikhda aadanaha oo ay suurtagal tahay in ay si wax ku ool ah u caabuqdo cudurka iyo tiibishada. Mabda'a ficilku wuxuu ku saleysan yahay cidhibtirka borotiinka ee wax lagu qoro.
Noocyada streptomycin waxay u oggolaaneysaa in si guul leh loo isticmaalo la dagaallanka cudurka qaaxada mycobacterium. Wuxuu burburiyaa inta badan bakteeriyada noocyada naxwaha leh iyo kuwa naxaasta leh. Waa fiican in lagu daaweeyo staphylococcus, wax yar ka sii xun - streptococcus. Ma shaqeynayo bakteeriyada anaerobic.
Isticmaalka daroogada si dhakhso ah ayuu u kobciyaa bakteeriyada iska caabisa. Waxaa jira jeermisyo loogu talagalay streptomycin waa dhexdhexaad nafaqo leh.
Daawada caafimaadka xoolaha, streptomycin sulfate waxaa loo isticmaalaa daaweynta meningitis, leptospirosis, pneumonia, infekshannada post-traumatic-ka iyo sumowga dhiiga kadib dhalmada; Calaamadaha 'catarrhal' ee malawadka, campylobacteriosis iyo actinomycosis ee xayawaanka beeraha iyo eeyda.
Waa muhiim! Streptomycin ma ahan wax ka taraya bakteeriyada iyo fayraska. Daroogada looma isticmaalo daaweynta sambabada, suufka.
Qiyaasta iyo maamulka
Daawada ayaa lagu duraa maqaarka ama muruqa. Diyaari xal xakameynaya sida soo socota: budada waxaa lagu kala diraa saline ama nikotiinka qaybta soo socota: 1 g of streptomycin halkii 1 ml ee dareeraha.
Xalka u-isticmaalka waxaa loo kaydin karaa wiiggii qaboojiyaha. Cirbadaha waxaa la siiyaa laba jeer maalintii, subaxa iyo fiidkii. Koorsada daaweynta waa 4 maalmood ilaa hal toddobaad.
Qalabka waxaa loo isticmaalaa iyada oo lala xiriirinayo penicillin iyo sulfonamides. Isku-dhafka waxay kordhinaysaa saameynta cirbadaha, waxayna ka hortagtaa soo bixitaanka noocyada adkeysiga bakteeriyada.
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka xayawaanka streptomycin ayaa muujiyay qiyaasta soo socda ee noocyada kala duwan ee xayawaanka beeraha.
Wakiilada qoyska lo'da, lo'da iyo buluuga waxaa la siiyaa daroogada qiyaasta 5 mg / kg oo miisaankeedu yahay dadka waaweyn, iyo 10 mg / kg oo miisaankoodu yahay xayawaanka yaryar.
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loola tacaalo cudurrada noocaan ah sida lo'da: pasteurellosis, ketosis, bararta cunaha, naaso, leukemia
Wixii riyaha iyo idaha dadka waaweyn, qiyaasta lagu taliyey waa 20 mg. Marka laga hadlayo dhalinyarada, waxaa lagama maarmaan ah in laga sii wado tilmaamaha 20 mg / kg miisaanka.
Qiyaasta farduhu waxay la mid tahay sida lo'da: 5 mg / kg xayawaanka qaangaarka ah, 10 mg / kg for the forests.
Fikradaha streptomycin waxaa loo maamulaa qiyaasta soo socda: 10 mg oo ah daawada halkii 1 kg ee culeyska shakhsiyaadka qaangaarka ah, iyo 20 mg / 1 kg doofaarka.
Ma taqaanaa? Waxaa jira fikrad khaldan ah oo ay doofaarka jecelyihiin in ay dhuuntaan dharka kaliya ee madadaalo leh; Dhab ahaantii, sidan oo kale waxay isku halleeyaan dulin: marka la qalajiyey, wasakhda ayaa la baxaysa dulinka. Intaa waxaa dheer, mareenka dareenka ayaa ka caawiya inay ku qaboojiyaan kuleylka.
Digaagga guud ahaan iyo digaagga gaar ahaan, streptomycin waxaa loo isticmaalaa sida soo socota: 30 mg oo ah daroogada halkii 1 kg oo ah qiyaasta shimbiraha qaangaarka ah. Digaagga (ducklings ama poults turkey) waxay qaataan 40 mg oo walax ah halkii kiilo oo culus.
Ukunta hilibka iyo digaaga ayaa la cuni karaa bini-aadanka wax aan ka horeyn saddex toddobaad kadib. Ukunyada laga helo shimbiraha illaa wakhtigaan waxaa loo isticmaali karaa cunnooyin xayawaan ah oo aan loo baahneyn in la gowraco mustaqbalka dhow.
Mawduuc gaar ah wuxuu u qalmaa cudurkan guud ee digaaga sida mycoplasmosis Xaaladdan oo kale, daroogadu waa isku qasan yihiin quudinta. Qiyaasaha streptomycin ee mycoplasmosis: 2 g oo ah streptomycin sulfate halkii 10 kg oo hadhuudh ah (galley, quudin).
Isticmaal quudintaan 5 maalmood gudahood, ka dib 7 maalmood oo marxaladan soo noqnoqonayso. Daaweynta noocan oo kale ah waxay khuseysaa kaliya marka la eego marxaladda hore ee cudurka. Shimbir oo leh nooc ka sii daran oo cudur ah ayaa u fiicnaan laheyd inuu gool dhaliyo.
Waxaad xiiseyneysaa inaad barato habab wax ku ool ah oo lagu daaweeyo cudurada sida digaagga sida: coccidiosis, pasteurellosis, shuban, colibacteriosis
Taxaddarrada iyo tilmaamaha gaarka ah
Waxaa jirey xaalado dermatitis ah xaaladaha soo noqnoqda ee daroogada. Hilibka xayawaanka waxaa loo isticmaalaa cuntada hal usbuuc ka dib dhammaadka koorsada daaweynta daroogada.
Haddii la gawraco horay loo soo dhigay, waxaad isticmaali kartaa baqdin si aad uhesho cunto lafo.
Waa muhiim! Haddii streptomycin la siiyo shimbir sida qanjirada, qadar yar, ukumo waa la cuni karaa ka dib afar maalmood, hilibka - laba toddobaad.
Caano ka mid ah xayawaanka beeraha, oo daawada loo isticmaalo daroogada, qofku wuxuu cuni karaa laba cisho ka dib cirbaddii ugu dambeysay. Caanaha laga helo lo'da inta lagu jiro habka daaweynta ayaa quudisa xayawaanka.
Dulqaadashada antibiyootikada guud ahaan, iyo gaar ahaan aminoglycosides. Hawlgabka renal iyo wadnaha. Kuma wada qeybin kartid streptomycin leh aminoglycosides kale. Haddii xayawaanku uu xasaasiyad ku leeyahay daawada, antihistamines waxaa loo isticmaalaa qiyaasaha lagu taliyey.
Sidoo kale akhri, wixii daawada xoolaha ah ee daawada xoolaha ah u isticmaala daawooyinka sida: Eleovita, E-selenium, Chiktonik, Dexafort, Sinestrol, Enrofloxacin, Levamizol, Alben, Ivermectin, Roncoleukin, Biovit-80, Fosprenil, Nitoks Forte
Waxaad kaydin kartaa oo u isticmaali kartaa daawada 36 bilood. Heerkulka lagu taliyey waa 0 ... + 25 ° C, meel aan carruurtu gaarin, qoyaan caadi ah, oo aan helin qorraxda tooska ah.
Waqtiga xannaaneeyo xayawaankaaga. Taas waxaad ku badbaadinaysaa naftooda iyo caafimaadkooda naftooda. Iyo haddii aad ku hawlan tahay beerista hilibka iyo waxyaabaha caanaha ee suuqgeynta, waxaad kaloo kaydin doontaa lacago badan.
Inkastoo dhowaan la soo dhaafay wax badan ayaa laga sheegay khatarta antibiyootikada, laakiin xaqiiqooyinka nolosheena ayaa ah sida aan iyaga oo aan adkaaneyn in lagu ilaaliyo caafimaadka labadaba iyo xayawaanka labadaba. Haddii aan ku qasbanahay in aan isticmaalno antibiyootikada daaweynta infakshannada, aan ugu yaraan u saxno.